Microsoft isina kusunungurwa Xbox Game Streaming app ye Windows inosanganisira kubata bata, gyro, uye zvimwe
Mufananidzo weAlex Castro / The Verge
Microsoft iri kupedzisa yayo Xbox Game Yekufambisa app ye Windows MaPC, ayo anosanganisira kuwana kumitambo yekushambadzira kubva kukambani xCloud sevhisi. Isu takakwanisa kuwana mukana kune yazvino vhezheni yeXbox Game Yekufambisa app ye Windows, isingazivikanwe uye isina kuburitswa app. Kana yaburitswa, iyo app icharega Windows vashandisi vanoyerera mitambo kubva kune yavo Xbox Series S / X consoles, uye kubva kuXCloud.
Parizvino, haugone kuyerera mitambo kubva kuiyo nyowani Xbox consoles kuenda Windows MaPC, sezvo izvi zvisingatsigirwe mune iripo Xbox Console Companion app. Iyi app nyowani ichagadzirisa izvo, uye zvakare inounza xCloud kutenderera ku Windows MaPC kekutanga. Takatanga kutarisa izvi xCloud app ye Windows gore rapera, uye yakavandudza zvakanyanya kubva ipapo.
Iyo Xbox iri kure yekutamba ficha, yekubatanidza kuXbox consoles, inoshanda zvakafanana neiyo iripo Console Companion. Unogona kumutsa Xbox console uri kure, wopinda, uye utambe mitambo chero kwauri.
Ikozvino kune yakazara yekubata rutsigiro, ichibvumira Surface kana zvimwe zvekubata zvechivhariso matambo kutamba Xbox mitambo isina mutungamiriri. Microsoft inoita kunge iri kuverenga imwe nzira yegyro rutsigiro pano, futi. Pane sarudzo yekugonesa izvi, asi zvinoita kunge isiri kushanda zvizere parizvino. Ichi chiitiko chemukati chebeta, saka hachina kupera.
Microsoft isina kusunungurwa Xbox Game Streaming app.
Microsoft inoitawo kunge ichiverenga hova 1080p dze xCloud, panzvimbo yeiyo 720p iriko nhasi. Izvi zviri pachena kuvandudza chiitiko pane Windows MaPC, pamberi pezvisarudzo zvepamusoro kamwe Microsoft paine yakavandudza maseva ayo eXCloud kuisa Xbox Series X Hardware.
Izvo hazvisati zvanyatso kujeka kuti ri ri ri rinhi riitwe riwanikwe zvakanyanya. Microsoft iri runyerekupe rwekuronga chiitiko "chitsva chemitambo" chemwedzi unouya, saka zvinoita kuti tinzwe zvakawanda pamusoro pehurongwa hwekambani yeXCloud (yewebhu uye iOS, zvakare) munguva pfupi.
PS5 vs Xbox Series X: Ndeapi anotevera-gen mitambo koni iwe yaunofanira kutenga?
PS5 vs Xbox Series X: Ndiani anoita akanakisa anotevera-gen mutambo wekutamba mu2021?
Dzidza mashandisiro ekunze dhiraivha kuwedzera yako Xbox Series X | S yekuchengetedza
Xbox Game Pass Cloud Gaming ongororo (xCloud): Inononoka uye yakadzikama inokunda mujaho?
Microsoft WindowsVhidhiyo yemutamboXbox (koni)